Labo nin oo ku eedeysan dilkii wasiir Cabaas Siraaji oo maanta maxkamad lasoo taagay (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Labo nin oo ku eedeysan dilkii wasiir Cabaas Siraaji oo maanta maxkamad lasoo taagay (SAWIRO)
Waxaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya lasoo taagay labo askari oo ka tirsan ilaaladii hanti dhowraha guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax oo markii dambe xilkiisa ku waayay dilkii Allaha u naxariistee wasiirkii howlaha guud ee Soomaaliya Marxuum Cabaas Siraaji.
Labadaan eedeysane oo lagu kala magacaabo Axmed C/laahi Cabdi Caydiid iyo Cismaan Salaad Barre ayaa ku eedeysan inay si bareer ah u dileen wasiirkii hore ee howlaha guud Allaha u naxariistee Cabaas Siraaji.
Maxkamadda ayaa sidoo kale u yeertay saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo habeenkii falka dilka ah dhacaayay shaqada ku qornaa iyo saraakiil ka tirsan kuwa tirsan dambi baarista dalka, si su’aallo looga weydiiyo qaabka uu falka dilka ah u dhacay.
Sidoo kale, waxaa maxkamadda la keenay qoryihii labada askari ay u adeegsadeen dilka wasiir Cabaas.
Dood dheer iyo su’aalo weydiin kadib ayaa garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay xeer illaalinta ciidamada ka dalbadeen inay keenaan cadeymo dheeri ah.
Ugu dambeyn, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida G/sare Xasan Cali Nuur Shuute oo warbaahinta la hadlay ayaa ku dhawaaqay in maxkamadda ay xiran tahay, isla markaana dib la isugu soo laaban doono marka ay xeer illaalitu keento caddeymo ku fillan kiiska loo heysto l;abdaasi askri.